Yini i-heatwave | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kubukeka sengathi kuleli sonto izinsuku zokuthiwa nezesabekayo zezinja sezifikile ekugcineni, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi uzihlomise ngokubekezela bese udonsa abalandeli kanye nama-air conditioner ukuze ukwazi ukumelana namagugu aphezulu kangaka wokushisa.
I-heatwave isho isikhathi esishisa kakhulu sonyaka nokuthi ikuphi amazinga okushisa adlula kalula ama-4 degrees kalula.
Ngokwezibalo ezahlukahlukene, izinsuku zezinja isikhathi esishisayo sonyaka nalapho amazinga okushisa efinyelela amanani aphezulu kakhulu. Isikhathi salesi sikhathi ngokuvamile sisukela kuJulayi 15 kuya ku-Agasti 15, yize kuvame ukuncika endaweni ngayinye. Alukho usuku oluqondile lwalesi siqalo futhi lokho kungenxa yezici eziningana njengokuthi iLanga liphakeme kakhulu ekuqaleni kwehlobo noma imisebe yelanga ebangela ukuthi uMhlaba ushise ngokweqile.
Ngale ndlela, i-heatwave iqala kamuva eSpain, kanti kwezinye izingxenye ze-Europe noma i-Afrika ifika ngaphambili. Phakathi nesikhathi sokushisa okuhlala isikhathi eside, izindawo zokungenisa umoya ezifudumele nezomile ezivela eNyakatho Afrika zivame ukukhiqizwa njalo. Kulezi zimo, kubalulekile ukuthatha izixwayiso eziningi ukugwema ukushaywa ukushisa okuyingozi ngoba kwesinye isikhathi kungadala ukufa komuntu obaphethe kabi.
Ngokusho kwesimo sezulu, lokhu kushisa okuzohlala izinsuku ezintathu kuya kwezingu-4 ngamazinga okushisa angaphezu kwama-40 degrees. Kodwa-ke ukushisa kulapha ukuhlala futhi Kunezindawo zenhlonhlo lapho izinga lokushisa eliphakathi nalawa masonto lizoba cishe ngama-38 degrees. Ngokunikwa la maqiniso, kusala kuphela ukupholisa kahle nokuvikela ngangokunokwenzeka emazingeni okushisa aphakeme kakhulu ajwayelekile ehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Yini i-heatwave